(L) ဆယ်ကျော်သက်များသည်အဘယ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောမဆုတ်မနစ်သောအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း (၂၀၀၇) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
(L) အဘယ်ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေထိုသို့သော Impulse အန္တရာယ် Takers (2007) Are
ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေထိုသို့သော Impulse အန္တရာယ် Takers Are အဘယ်ကြောင့်
နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၇ - ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများသည်မျက်စိကိုမမြင်နိုင်ကြသောကြောင့် ဦး နှောက်၏သုတေသနအသစ်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်အချို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုမကြာခဏလွတ်လပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသိပညာနှင့်ရှာဖွေလေ့လာခြင်းတို့ဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း ဦး နှောက်၏အပြောင်းအလဲများသည်မတူညီသောနှုန်းထားများဖြင့်ရင့်ကျက်သောကြောင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်အန္တရာယ်များသောအပြုအမူများ၊ စွဲလမ်းမှုအားနည်းချက်များနှင့်စိတ်ရောဂါတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
လူသားတွေအတွက်မကြာမီကပုံရိပ်လေ့လာမှုများဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်သည်အထိပြီးပြည့်စုံသောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသပါ။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံး inhibitory နှင့် excitatory ဦးနှောက်ဓာတုစနစ်များ၏ status ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာများနှင့်ဦးနှောက်ဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှုသည်စမ်းသပ်သုတေသနသူတို့နှင့်အတူယင်းတွေ့ရှိချက်ကိုပေါင်းစပ်ပြီး, ဆယ်ကျော်သက်များတွင်မူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်သူငယ်နှင့်အပြည့်အဝရင့်ကျက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှစ်ဦးစလုံးထံမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ တစ်နည်းမှာဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ပေါ်မှာနည်းပါးလာမိုင်နှင့်အတူဖွင့်ထားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက်ကိုမပါ!
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ကဒီသင်ယူမှုနှုန်းထားများလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပေမယ့်, ကလည်းထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲလမ်း၏ဝတ္ထုများအဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှု, ဤအုပ်စုကိုပိုပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်စေခြင်းငှါ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နှင့်ပေမည်။ ဤနေရာတွင်တင်ပြအဆိုပါသုတေသနဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ထူးခြားသော status ကိုနားလည်သဘောပေါက်အချို့အရေးကြီးသောသစ်ကိုတိုးတက်လာမီးမောင်းထိုးပြ။
အသစ်ကသုတေသနအတွက်, အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်လူမှုရေးအထီးကျန်ဖြစ်စေထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ unstressed counterparts တွေကိုအဖြစ်မကြီးထွားခဲ့ပါဘူးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအနည်းဆုံးအလေးချိန်ရရှိခဲ့, ဖိအားဤနှစ်မျိုးစိတ်ဖိစီးမှု၏အလုံးစုံသက်ရောက်မှုပိုဆိုးလာမှတက် add ကြောင်းအကြံပြုကပြောပါတယ် စယ် Romeo လည်း New York မှာယခု Barnard ကောလိပ်မှာ New York မှာ Rockefeller တက္ကသိုလ်ပါရဂူဘွဲ့, ။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးဆန္ဒရှိအခြေအနေမှာအရှုံးမပေးဖို့တိရိစ္ဆာန်များကြာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတိုင်းတာမယ့်အမူအကျင့်စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်း, Romeo မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုကြုံတွေ့ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များလျော့နည်းရုန်းကန်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ပိုမြန်အပ်, သူတို့က သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ကျရောဂါတူသောသင်ယူအကူအညီမဲ့အပြုအမူတွေ့ကြုံခဲ့အကြံပြုခြင်း။ ကြီးထွားနှုန်းဆင်တူ, နှစ်ဦးစလုံးဖိအားကြုံနေရတိရိစ္ဆာန်များစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူများ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအဆင့်ကိုပြ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သွေးထဲတွင်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းဖြစ်သော corticosterone ၏တိုင်းတာမှုများသည်အပျိုဖော်ဝင်စဉ်ကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိတွေ့သောတိရိစ္ဆာန်များသည်လူကြီးဘဝတွင်မြင့်မားသောအဆင့်ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ “ အပျိုဖော်ဝင်စဉ်ကာလအတွင်းသာမကစိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုသည်စိတ်ဖိစီးမှုအပြုအမူများနှင့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအတိုင်းအတာများပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များသည်တူညီသောစိတ်ဖိစီးမှုပမာဏကိုခံစားခဲ့ရသော်လည်းအပျိုဖော်ဝင်ပြီးနောက်တွင်ဤပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတစ်ရာကိုမျှမပြခဲ့ပါ။ "Romeo ကပြောပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများလေ့လာမှုအရအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုများသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုအားနည်းစေနိုင်သည်ကိုပြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုသည်တိရိစ္ဆာန်များတွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုမော်ဒယ်တင်ရန်အတွက် Romeo နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အပျိုဖော်ဝင်စဉ်ကာလအတွင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုများ၊ တစ်နေ့တစ်နေ့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုတစ်နာရီသို့မဟုတ်လူမှုရေးအထီးကျန် - သြဇာကြီးထွားမှု၊ လူကြီးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းအဆင့်များ။
ပုံမှန်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသောလူသားများတွင်အဓိကလက္ခဏာသုံးခုရှိသည် - ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ သင်ယူနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများမြင့်ခြင်း။ Romeo ကြွက်များကိုလေ့လာခြင်းသည်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများကိုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်တွင်ပုံတူကူးယူနိုင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသောအမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာရန်နည်းလမ်းတစ်ခုပေးပြီးထိုအပြုအမူနှင့်ဇီဝကမ္မပြproblemsနာများကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်လုပ်ရန်အတွက်ကုသမှုသို့မဟုတ် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ကူညီလိမ့်မည်။
New Buffalo State College မှ Ph.D မှ Jean Di Pirro ကလေ့လာမှုအသစ်အရမူးယစ်ဆေးဝါး ecstasy ၏လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပိုမိုသိသာထင်ရှားပြီးမူးယစ်ဆေးဝါး၏တက်ကြွသောသက်ရောက်မှုများထက်ကျော်လွန်ကြောင်း၊ ထို့အပြင်ထပ်ခါတလဲလဲ ecstasy မူးရူးခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သော serotonin နှင့် oxytocin တို့၏ရေရှည်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရလဒ်များအရ ecstasy ကိုအရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းသည်သုံးစွဲသူများပုံမှန်အားဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိသောလူမှုရေးအပြုအမူများတိုးပွားလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့်လူမှုဆက်ဆံရေးအားနည်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုခံစားရခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းကဲ့သို့သောအာရုံခံစားမှုအတွေ့အကြုံများသည်ပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏လူမှုရေးအပြုအမူနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။
"တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်တွေက ecstasy က ဦး နှောက်ထဲမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်၊ ​​ဥပမာအားဖြင့် serotonin အာရုံခံဆဲလ်ရဲ့ neurotoxicity, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးဆက်များကိုဝေးကွာသောလူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများဖြစ်သည်" ဟု Di Pirro ကဆိုသည်။
သည်အခြားသုတေသနများတွင်သိပ္ပံပညာရှင်များမြီးကောင်ပေါက် relapse ၏ကြီးမြတ်သောဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှဦးဆောင်လူကြီးများထက်ပိုရှည်မူးယစ်ဆေး-related အသင်းအဖွဲ့များကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များသည်ယခင်ကကင်းနှင့်အတူတွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာပိုနှစ်သက်ဖို့သင်ယူပြီးတာနဲ့သူတို့လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအကွိုကျဆုံးရှုံးဖို့ 75 ရာခိုင်နှုန်းကိုအချိန်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုအကြံပြုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့ abstinence အားဖြင့်ဆက်ဆံဖို့ပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်အကြောင်း, Harvard Medical School ကနှင့် Belmont, Mass အတွက် McLean ဆေးရုံ၏ဟဲလ် Brenhouse, Ph.D နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် SL Anderson တို့, Ph.D, ကပြောပါတယ်။
ကိုကာကိုလာ၏သေးငယ်သောသတိပေးချက်ပမာဏနှင့်ထိတွေ့ပါကဆယ်ကျော်သက်များသည်လူကြီးများထက်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုပိုမိုပြင်းထန်စွာပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ခိုင်မာသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုများဖြစ်ပေါ်လာရန်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းရည်ကို အခြေခံ၍ လေ့ကျင့်ခန်းများသို့မဟုတ်တေးဂီတကဲ့သို့သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအစားထိုးခြင်းပါဝင်သောကုသမှုကိုအရွယ်ရောက်သူများထံမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းထက် ပို၍ သင့်လျော်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
“ ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းဒီအချက်အလက်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုကလူကြီးများထက်မူးယစ်ဆေးဝါးဆက်စပ်မှုနှင့်အခြေအနေများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းတဲ့အမှတ်တရများကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးအကြိုသက်သေအထောက်အထားတွေပေးထားတယ်။ ထို့အပြင်မြီးကောင်ပေါက်များသည်ကန ဦး မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုနည်းပြီးသည့်နောက်တွင်ထပ်မံဖြစ်ပွားလာနိုင်သည်။
Pavlov ၏ကျော်ကြားသောခွေးများသည်ခေါင်းလောင်း၏အသံကိုတုန့်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့ပင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်ယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သာမာန်အားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းရှိအချက်အလက်များကိုပျော်စရာခံစားချက်များနှင့်ပေါင်းသင်းနိုင်ခြင်းသည်ကလေးဘဝ မှစ၍ ကျော်လွန်၍ ကလေးငယ်တစ် ဦး ၏ရှင်သန်မှုကိုသေချာစေသည်။ သို့သော်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်မည်သည့်အသင်းများသည်အရေးကြီးသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သတိရသင့်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လိုအပ်သည်။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ဆုလာဘ်စနစ်အားပုံမှန်မဟုတ်ဘဲမြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေပြီးအခြားအချက်အလက်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များအတွက်မှတ်ဥာဏ်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်များသည်သုညကုသမှုကိုပိုမိုခက်ခဲစေပြီးပြန်လည်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ဤအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအဖြစ်အပျက်များအတွက်ပိုမိုအားရဖွယ်အမှတ်ရဖွယ်များရှိသည်ဟု Brenhouse ကပြောကြားသည်။
“ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုနားလည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤအရေးပါသောအဆင့်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်ထူးခြားသောပစ်မှတ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကွဲပြားခြားနားစွာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူစွာကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်အရွယ်ရောက်သူများထက်စွဲလမ်းမှုကုသမှုနည်းဗျူဟာများလိုအပ်လိမ့်မည်။
သည်အခြားသုတေသနများတွင်တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုအသက်အရွယ်အတွက်ကျဆင်းခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားလူငယ်အကြားမကြာခဏဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုတစ်ခုတိုးပြသထားတယ်။ အသုံးပြုမှုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုငယ်ရွယ်သောအသက်နှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ပုံစံများမှာစတင်သည်ယခုရရှိနိုင်ပါ, နယ်သာလန်အတွက်တက္ကသိုလ် Medical Center မှ Utrecht မှာအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Rudolf Magnus Institute က၏ Gerry Jager, Ph.D, ကပြောပါတယ်။
Jager နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) သုံးပြီးမကြာခဏဆေးခြောက်မှတ်ဉာဏ်အဘို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုမှု, သင်ယူမှုနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အကျိုးဆက်များကိုလေ့လာခဲ့သည်။
အများအပြားကလေ့လာမှုများစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုပေါ်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏ပြင်းထန်မှုဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကစတင်ခဲ့သည်အခါအသက်အရွယ်အပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကိုစတင်သူကို 1) အဲဒီအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အကြီးအကျယ်မှီခိုဖြစ်လာဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်များအတွက်အကြောင်းပြချက်; ဒါမှမဟုတ် 2) ကဦးနှောက်နေဆဲဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနှင့်ဦးနှောက် function ကိုအတွက်မြဲပြောင်းလဲရန်အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမကြာခဏဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏ဆိုးကျိုးများလူကြီးစဉ်အတွင်းထက်ပိုမိုလေးနက်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် Jager ၏ဓာတ်ခွဲခန်းသည်အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ကြားယောက်ျားလေး ၁၀ ဦး ကိုပုံမှန်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်မှနေ့စဉ်အထိနှစ်နှစ်ခန့်လေ့လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကိုအသက်အရွယ်၊ IQ ရမှတ်များနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောရွယ်တူကိုးကောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများအားလုံးသည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ကြာရှည်စွာဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီဆေးခြောက်နှင့်အရက်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ပါတ်ရှောင်ကြဉ်ရသည်။ ၎င်းသည်ဆီးခန္ဓာကိုယ်၏နမူနာများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဇီဝဖြစ်ပျက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များအားလုံးဘာသာရပ်များမှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုမှာသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်လူသိများသောတိုကျရိုကျ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, အပါအဝင်, ဦးနှောက်ဒေသများ activated ကြောင်းပြသသည့် fMRI စကင်နာ, တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်တာဝန်ဖျော်ဖြေ, Jager ကပြောပါတယ်။
အဆိုပါဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ Non-သုံးပြီးရွယ်တူကဲ့သို့တူညီသောဦးနှောက်ဒေသများ activated နှင့်အညီအမျှကောင်းစွာ task ကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်ဆေးခြောက်အသုံးပြုသူများထိန်းချုပ်မှုထက်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်မြင့်ပြသထားသော။ အလုပ်တခုကိုစွမ်းဆောင်ရည်ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ဒီဦးနှောက်ကိုပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်ထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲလုပ်ကိုင်ဖို့ရှိကြောင်းညွှန်ပြနိုင်ဘူး။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အပေါငျးတို့သမီစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မှအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ဆေးခြောက်ကနေ abstinent ခဲ့ကြသည်အတိုင်းဤအကျိုးသက်ရောက်မှု, ဆေးခြောက်မဆိုရှိနေဆဲဟု pharmacological အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေထိုသို့တိုးမြှင့်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု abstinence ပိုမိုကြာရှည်ကာလပြီးနောက်ဆက်ရှိနေသေးခြင်းရှိမရှိထင်ရှားစေခြင်းငှါနေဆဲဖြစ်သည်။
အခွားသောသုတေသနဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်စနစ်များသေးအပြည့်အဝကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်နှင့်ကလေးများထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်များနှင့်ထကြွလွယ်သောထုံးစံ၌ပြုမူလေ့မဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှဂျက်စီကာ Cohen ကို, MA, ကပြောပါတယ် Los Angeles မြို့။
ထို့အပြင်မြီးကောင်ပေါက်များသည်ကလေးများထက်ဆုကြေးငွေပမာဏအမျိုးမျိုးအကြားခြားနားချက်များကို ပိုမို၍ အကင်းပါးပါးများတတ်သည်။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုအာရုံခံနိုင်သည့်အာရုံကြောareasရိယာများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များ၌ကလေးများထက် ပိုမို၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့ရှိစေသည်။ “ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာဘာကြောင့်အန္တရာယ်များတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ရတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာကကလေးငယ်တွေထက်ပိုပြီးမကြာခဏဆုတွေရစေနိုင်တာကိုရှင်းပြတာကအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ဟောင်း 26 နှစ် 10 ကနေအသက်အရွယ်အတွင်းရှိအထိ 19 သင်တန်းသားများကိုပါဝင်သောတစ်ခု fMRI လေ့လာမှုမှလာကြ၏။ သားသမီးများ၏အုပ်စု 10 ထံမှ 12 မှအသက်အနှစ်အရွယ်ရှိနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အုပ်စု 14 ကနေအဟောင်း 19 နှစ်အရွယ်ရှိ။ ဓါတ်ပုံတွေကိုတခု fMRI စက်များတွင်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်၏ခေါ်ဆောင်သွားစဉ်အားလုံးသည်ပါဝင်သူတစ်ဦးကကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးသင်တန်းသားများသည် amygdala လို့ခေါ်တဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှုပြသ ventral striatum, သူတို့မရသောအခါသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့က, ဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ် prefrontal cortex medial ။ လူတွေကိုဆုခခြံအခါအဲဒီဒေသတွေမှာတစ်ခုချင်းစီတိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူယခင်လေ့လာမှုများအတွက်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ကလေးများမြီးကောင်ပေါက်အတွက်မဟုတ်ကလေးတွေအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်၏အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုများအားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်ခဲ့ကြသည်ထက်အပြုအမူ, မြီးကောင်ပေါက်ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်တန်ဖိုးများကိုပိုမိုထိခိုက်မခံခဲ့ကြသည်။ အသက်အရွယ်နှင့်အတူဆက်စပ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဆုချဖို့မှတ်ချက်ပြုတိုးမြှင့်အပြုအမူ sensitivity ကိုပုံဖော်သောဦးနှောက်၏ဒေသများရှိကြ၏လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အာရုံကြောဒေတာတွေနဲ့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
striatum တွင်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ဆုရရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ striatum အတွင်းရှိအချို့သောဒေသခွဲများကသာ။ ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်များနှင့်အခြားသူများကိုသေးငယ်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်တုန့်ပြန်အသက်အရွယ် -related အပြောင်းအလဲများကိုပြသခဲ့သည်။ "ဒီရလဒ်တွေက striatum ဟာဆုလာဘ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အကျိုးရလဒ်တွေကိုအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အနုတ်လက္ခဏာကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ခုစလုံးကိုပိုမိုထိရောက်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုများအထိမခံနိုင်အောင်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သာမက၊
“ ဆယ်ကျော်သက်များသည်ငယ်ရွယ်သောကလေးများထက်ဆုချရန် ပို၍ ထိခိုက်လွယ်ကြောင်းအသိပညာဖြင့်လက်နက်ကိုင်ထားသော်လည်းယခင်လေ့လာမှုများအရမိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်သူတို့၏အာရုံကြောဒေသများသည်အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးခြင်းမရှိသေးကြောင်းကိုသဘောပေါက် မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ရှိနိုင်သော်လည်းဆွဲဆောင်မှုရှိသောအပြုအမူများ၊ ပိုမိုလိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အပြုအမူများကိုသင်ကြားပေးခြင်းနှင့်အားပေးခြင်းတို့အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ”
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, သုတေသနရုံဆယ်ကျော်သက်တွေအကြောင်းယခင်ယူဆချက်မမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဘယ်လိုအလင်းကိုသွန်းမှစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင်အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူဦးရေအချိုးအစားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး, ဤလူဦးရေထူးခြားသော, ပညာရေးလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ထားပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားအကောင့်ထဲသို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအကြိုးဆကျယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
အစောပိုင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်အများကြီးသုတေသနအစောပိုင်းပညာရေး၏လယ်ပြင်သို့ဘာသာပြန်ထားသောထားပြီး, နှင့်အိုမင်းဦးနှောက်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဖောက်ပြန်အဖြစ်မမှန်များအတွက်ကုထုံးမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးအပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်၏ထူးခြားသော features တွေသာမကြာသေးမီကအသိအမှတ်ပြုလျက်ရှိသည်နှင့်ဖွယ်ရှိဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုသူတို့အားပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးချဉ်းကပ်ဘို့အဓိကသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။